Izindaba - I-AGC, umkhiqizi wezingilazi zezimoto wokuqala emhlabeni, yonga amahora angaphezu kuka-13000 abantu ngonyaka nge-RPA
I-AGC yasungulwa ngo-1907 futhi ikomkhulu layo laliseTokyo, eJapan. Yakhiqiza ngokuzimela izitini eziphikisayo zesithando somlilo sengilazi ngo-1916 kanye nomlotha we-soda njengengilazi eluhlaza ngo-1917. Inezinkampani ezingaphezu kuka-290 kanye nabasebenzi abangaphezu kuka-50000 emazweni angaphezu kuka-30 nasezifundeni emhlabeni jikelele, ikakhulukazi ezibandakanya ingilazi yemoto, ukwakha ingilazi. , ingilazi yesibonisi, njll. Mayelana nengilazi yezimoto, i-AGC ihlanganisa ngaphezu kuka-90% wabakhiqizi bezimoto emhlabeni wonke, ngesabelo semakethe esingaphezu kuka-30%, esikleliswe kuqala emhlabeni.
Eminyakeni yamuva nje, ngokuguga kwesibalo sabantu baseJapan kanye nokufika kwegagasi loguquko lwedijithali, ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kahle, ukonga izinsiza zabantu kanye nokwandisa izindleko zokusebenza, i-AGC yaqala ukusebenzisa i-RPA ekuqaleni kuka-2017 ukuze izenzele ibhizinisi ngaphezu kwe-100. izimo ezifana nokubalwa kwezimali, ukukhiqiza kanye nempahla, okonga amahora angaphezu kuka-13000 abantu ngonyaka.
Ekukhetheni "indondo ye-smart work 2021" ephethwe uhulumeni waseJapan (imithombo yezindaba edumile enomlando weminyaka engama-52), i-AGC yawina umklomelo okhethekile wamajaji wephrojekthi ye-RPA yokuncoma impumelelo ecebile ye-AGC ekusetshenzisweni kwe-RPA ohlelweni ukuguqulwa kwedijithali.
Nakuba i-AGC ikleliswe kuqala emakethe yomhlaba yabakhiqizi bezingilazi zezimoto, ngokuthengiswa kwaminyaka yonke kwamayen angaphezu kwezigidigidi eziyi-1.4, akulula ukunganqotshwa esimweni sebhizinisi esishintsha ngokushesha. Ukuze kuqiniswe ukuncintisana kwemboni, ngo-2017, ngaphansi kwesinqumo sabaphathi abaphezulu be-AGC, kwaqalwa umgwaqo wokuguqulwa kwedijithali, kwasungulwa nomnyango ozimele we-DX (uguquko lwedijithali), futhi uTerai waqokwa njengenhloko yokukhuthaza. inqubo yenguquko yedijithali yeqembu lonke.
USiguchi, inhloko yokuguqulwa kwedijithali ye-AGC, uthe i-RPA ingelinye lamathuluzi abalulekile ohlelo lokuguqulwa kwedijithali lwe-AGC, olwazanywa emnyangweni wezokugcinwa kwezimali ngo-2017. Umphumela wokufaka isicelo we-RPA udlule lokho ebesikulindele. Kwathi ngo-2018, sayinweba kweminye iminyango futhi sandisa inani lezimo zebhizinisi ezizenzakalelayo laya ku-25. Ukuze siqinisekise izinga lokuphromotha kanye nomthelela wephrojekthi ye-RPA, sibeka yonke inqubo yokuklama nokunakekelwa kumhlinzeki wesevisi yezobuchwepheshe wenkampani yangaphandle. , kodwa ezinye izinqubo ezizenzakalelayo ezizenzakalelayo ziqedwa ngabasebenzi. Amaqiniso afakazele ukuthi le modi ye-hybrid iyisinqumo esihle.
Ngosizo lwale modi exubile, iphrojekthi ye-AGC ye-RPA yenze inqubekelaphambili ngokushesha futhi yanda ngempumelelo kwezokukhiqiza, ezokuthengisa, ezokuthutha, ezokugcinwa kwezimali kanye neminye iminyango. Ekupheleni kuka-2019, i-AGC isisindise amahora angu-4400 abantu ngonyaka nge-RPA; Ekupheleni kuka-2020, i-AGC iqhubekile nokwandisa ububanzi bezicelo ze-RPA, yonga amahora angaphezu kuka-13000 abantu, futhi yandisa inani lezimo zebhizinisi ezishintshayo zaba ngaphezu kwe-100.
Uma kuziwa endleleni yokwandisa ngempumelelo i-RPA ngaphakathi, u-taniya uthe i-AGC izobamba "i-AGC Exhibition ehlakaniphile" ngaphakathi minyaka yonke, eyethula ngokuyinhloko amacala enkampani okusebenza kobuchwepheshe obuhlukahlukene bedijithali. Kulo mbukiso, sibe nomboniso we-RPA endlunkulu yaseJapane nasemagatsheni aphesheya kwezilwandle, futhi sadonsa ukunaka kweminyango eminingi.
Ukwengeza, ingqungquthela yokwabelana nge-inthanethi ye-RPA yabanjwa ngo-2020. Ngaleso sikhathi, abasebenzi abangaphezu kuka-600 babambe iqhaza kulo mcimbi, okubonisa ukuthi abasebenzi banesithakazelo esikhulu ku-RPA. Ukuze kuqhutshekwe nokukhishwa kolwazi lwe-RPA, i-AGC izohlale ibambe imihlangano emincane yokwabelana ye-RPA, njengobuchwepheshe bamuva be-RPA, ukwabelana ngecala lesicelo esisebenzayo se-RPA, njll. isilinganiso asisikhulu ngempela, kodwa sizokhulisa intshisekelo yabasebenzi nokubamba iqhaza ku-RPA.
Okhethweni "lomklomelo we-smart work 2021" ophethwe uhulumeni wase-Japan (imithombo yezindaba edumile enomlando weminyaka engama-52), i-AGC yawina umklomelo okhethekile wamajaji ngokusetshenziswa kwayo okujulile kweminyaka eminingi kwe-RPA. UTerai uthe lokhu kuqinisekisa uguquko lwedijithali lwe-AGC kanye nemiphumela yokusebenzisa i-RPA, okwenza i-AGC izimisele nakakhulu ukusebenzisa i-RPA futhi ikholelwe ngokuqinile ukuthi izodlala indima ebalulekile emgwaqeni wokuguqulwa kwedijithali.
Ukuze ijulise ngokuqhubekayo ukusetshenziswa kokuzenzakalela kwedijithali, i-AGC yenze uhlelo olunemininingwane lwe-RPA lwemfundo yemvelo. UTerai uthe ngokuzayo, umnyango ngamunye we-AGC uzosungula izikhundla ezintathu ezintsha ze-RPA, okuwumqondisi we-RPA, unjiniyela we-RPA wokuthuthukiswa / wokulungisa kanye nabasebenzi be-RPA, ukuze kuqinisekiswe ukunwetshwa okushelelayo kanye nokuqaliswa kwamaphrojekthi ezishintshayo.
Umphathi we-RPA udinga ukuba nolwazi olucebile lwethiyori ye-automation kanye nekhono lokwenza, futhi umnyango we-AGC DX uzomqeqeshela uhlelo oluhlelekile; Unjiniyela wokuthuthukiswa kwe-RPA / wokulungisa udinga ukuba nekhono ekwakhiweni kwenqubo ezenzakalelayo neminye imisebenzi, futhi uzothola usizo lokuqeqeshwa kwe-AGC nsuku zonke; Odokotela be-RPA balula, inqobo nje uma bekwazi ukusebenza okuzenzakalelayo okuyisisekelo.
Ngokuphathelene nokuqanjwa kabusha kobuchwepheshe be-RPA, i-AGC izokwandisa ukuhlanganiswa nobunye ubuchwepheshe obuhlakaniphile. Njengamanje, inhlanganisela ne-OCR, NLP, ML nobunye ubuchwepheshe bushelelezi kakhulu, futhi okuwukuphela kwendlela yokwandisa amandla omngcele we-RPA. Sekukonke, i-RPA idlala indima ebaluleke kakhulu esu le-AGC lokuguqula idijithali